Ikhaya - Umsizi weVisa
Sawubona, Singakusiza Kanjani?
OKUSHA: Amanxusa ase-US ayavula futhi. IVisa Helper iyaqhubeka nokuqapha ubhadane lwe-COVID-19 nganoma yiziphi izibuyekezo ezimayelana nokufuduka nokuhamba.
Funda ukuthi ungayithola kanjani i-visa yase-US ngokushesha nangokulula.
Joyina Inethiwekhi Yomsizi We-Visa
Thola i-visa yase-US, ngaphandle kwenkinga.
Amathuluzi wethu wesikhulumi anamandla, imibuzo nemikhombandlela ekulula ukuyiqonda ikusekela nge-visa yakho yase-US nohambo lokufuduka, zonke izindlela.
Funda ukuthi ungathutha kanjani futhi uhambe noVisa Helper!
IGreen Card Lottery Visa
Ama-visa Okushintshaniswa Kwamasiko
Isiteji sokuqala se-visa sokuqala esisodwa.
Ukwamukelwa i-visa yase-US akuyona into elula.
Kunezinyathelo eziningi eziyinkimbinkimbi ongadlula kuzo, i-maze engapheli yezinsizakusebenza eziku-inthanethi, nokuzibonela ngokwakho kungaba nzima.
Kungakho senze iVisa Helper; isitolo sakho sokuthenga esisodwa se-inthanethi kanye nesikhungo sezinsiza zokufuduka.
Noma ngabe usuzofaka isicelo se-visa yase-US noma usuvele ufake isicelo futhi unamathele endaweni ethile endleleni - izinkomba zepulatifomu, imibuzo yethu namathuluzi akuqondisa ezinyathelweni zokuthola i-visa yakho ivunyelwe, ngokushesha.
Khetha izwe lakho.
Ipulatifomu yethu inikeza imininingwane yase-visa yaseMelika nemininingwane yokuthuthela kwelinye izwe eyenzelwe amazwe athile.
Khetha izwe lakho ngezansi, ukubona ukuthi sinayo yini imihlahlandlela, izinsizakusebenza kanye nolwazi lobuzwe bakho!
Uvela kuliphi izwe Albania Algeria Angola Argentina Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Belarus Benin Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Burkina Faso Brunei Bulgaria Cape Verde Cambodia Cameroon Chad China Colombia Côte d'Ivoire Costa Rica Croatia Cuba i-Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Eritrea Ethiopia Gabon Gambia Georgia Ghana Guatemala Guinea Honduras i-Hong Kong India Indonesia Iran Iraq Israel Jamaica Jordan Kazakhstan Kenya Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Libya Macedonia Malawi Malaysia Mali Mauritius Mexico Moldova Monaco Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Namibia Nepal Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Palestine Panama Paraguay Peru Philippines Qatar Romania Russia Rwanda I-Saudi Arabia Senegal Serbia Sierra Leone Singapore Somalia Iningizimu Afrika i-Sri Lanka Sudan Tajikistan Tanzania Thailand Togo Tunisia igalikuni Turkmenistan Uganda Ukraine I-United Arab Emirates Uruguay Uzbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe USA
Uhambo lwe-Visa oluku-inthanethi-
Funda ukuthi ungasifaka kanjani isicelo se-visa yase-US ngaphansi kwemizuzu engama-30.
Ngeke kudingeke uchithe amahora ucwilisa emininingwaneni ukuze uphendule imibuzo yakho ehlobene ne-visa.
Ithuluzi lethu eliku-inthanethi le-Visa Journey lisebenzisa imibuzo elula yokukhetha enqamulelayo yehle ngokushesha lapho ukhona ku-visa yakho noma ohambweni lokufika.
Ngokuya ngezimpendulo zakho, umsizi weVisa ube esekulethela izinkombandlela ezithile nolwazi olwenzelwe wena okufanele ululandele ukuze uhambise isicelo sakho se-visa.
Imihlahlandlela elula ukuyiqonda-
Hlela izinyathelo zakho ezilandelayo, ngemizuzu.
Imihlahlandlela yethu yehlukanisa izihloko eziyinkimbinkimbi ze-visa nezokufuduka zibe yizinyathelo ezilula, eziqondakala kalula.
Umhlahlandlela ngamunye uqukethe imininingwane esesikhathini ehambisana kuphela nezimo zakho nezwe lakho lokuzalwa.
Ngemizuzu embalwa, ungafunda imihlahlandlela yethu, uqonde izinyathelo zakho ezilandelayo, bese uthatha isinyathelo ngokushesha.
-Visa Ukufaneleka Ukuhlolwa-
Bikezela amathuba akho okuthola i-visa, ngaphambi kokufaka isicelo.
I-Visa Eligibility Test yethu iyithuluzi eliqhutshwa ngokwezibalo elingakwazi ukubikezela izingqinamba zakho zokuthola ngempumelelo i-visa yase-US.
Izici zamathuluzi emininingwaneni yakho kanye nobudlelwano obukhona phakathi kwezwe lakho ne-United States.
Ngokuya ngamathuba akho, unganquma ukuthi uzofaka engcupheni isikhathi sakho, imali nomzamo wokufaka isicelo se-visa.
Izicelo ze-visa ezingenabungozi, ezenzelwe wena.
Ukubhalisela ipulatifomu yethu kuzokunikeza ukufinyelela okukhethekile kubachwepheshe bama-visa nabameli bokufika, kanye nabachwepheshe bokucutshungulwa kwe-visa abathembekile ukuze bakwenzele isicelo sakho se-visa.
Ubufakazi nedumela likazakwethu ngamunye kuhlolwe ngokucophelela ukuqinisekisa ukuthi uxhuma nomlingani ohamba phambili ukukusiza ngecala lakho le-visa.
Thola ukufinyelela okugcwele kupulatifomu yethu ngokubhalisa ngenkokhelo encane kanye.
2. I-Visa Questionnaire
Phendula imibuzo elula yokuzikhethela ukusiza ipulatifomu yethu inciphise ngqo ukuthi ukuphi ku-visa yakho noma ohambweni lokufika.
3. Thatha Isinyathelo
Thola imihlahlandlela yama-visa efanele, eyenziwe ngezifiso, ulinganisele amathuba akho okuthola i-visa ngokuhlolwa kwethu kokufaneleka kwe-Visa futhi uhlanganyele nokusebenzisana okuqinisekisiwe kwabantu besithathu.
$ 25 inani.
Vula ngokugcwele lifetime ukufinyelela ku-Visa Helper ngokutshala imali okuncane, okukodwa kwe- $ 25 USD nje.
Ukufinyelela ku-Visa Helper Platform
Ukufinyelela kubameli bokufika kanye nabaprosesa be-visa
Ithuluzi Lokuhlola Ukufaneleka kweVisa
Imihlahlandlela yama-Visa esesikhathini
Izinsizakusebenza eziku-inthanethi namabhulogi
Ukusekelwa Kwamakhasimende Kunikezelwe
Vikela emaphutheni wohlelo lokusebenza abiza kakhulu
Iphutha kuhlelo lwakho lokusebenza lwe-visa lingabambezela ukuvunywa izinyanga - noma ngisho neminyaka.
Lapho ubhalisela i-Visa Helper, ngeke ugcine kuphela isikhathi ungadingi ukucwaninga yonke into ngokwakho, uzoba nesandla esikusizayo ekukuvikeleni ekwenzeni amaphutha wohlelo lokusebenza olubizayo.
Okushiwo amakhasimende ethu:
Ngikwazile ukwazi kahle ukuthi ngenzenjani ukuze ngidlulisele umyeni wami eSaudi Arabia ngeVisa Yomshado. Ukusebenzisa le platform kulula kakhulu! Kungithathe ngaphansi kwemizuzu eyi-10 futhi bengikwazi ukufaka isicelo. Angifuni ukubonga uMsizi weVisa ngokwanele!
Inxusa laseMelika eRussia kwakunzima ukubhekana nalo, sasingazi ukuthi sizokwenzenjani ukuze iFiance Visa yethu idlulele. Manje sesazi konke okumele sikwazi ngezinyathelo zethu ezilandelayo ngenxa yoMsizi WeVisa! Benza konke kube lula ukwazi. Umkami uphethe i-visa yakhe futhi uhlala nami e-USA.
IVisa Helper yangiguqula ngokuphelele impilo yomkami. Ngikwazile ukuqonda ukuthi hlobo luni lwe-visa ebengiludinga, inqubo, nazo zonke izinyathelo esizidingayo ukuze siqiniseke ukuthi sithola i-Spousal Visa yethu. Ngincoma kakhulu noma ngubani onenkinga ngecala lakhe lokufika ukuba asebenzise iVisa Helper.
Ngamukelwa eNyuvesi yami yamaphupho eVirginia! Bengingenaso isikhathi noma ulwazi lokuzifaka kimi kepha umsizi weVisa wakwenza kwaba lula kakhulu. Esikhathini esingaphansi kosuku olungu-1 ngikwazile ukufaka isicelo seVisa yabafundi.
IVisa Helper yisona sizathu esenza umfowethu omncane eze e-United States ngemuva kweminyaka elindile. Bengingenalwazi futhi bengingazi ukuthi ngingalusebenzisa kanjani lolu hlelo, ngokusebenzisa uVisa Helper ngikwazile ukuxhumana nommeli ozosisiza ecaleni lethu. Uthando oluningi kuMsizi weVisa!
Unkosikazi wami weminyaka engu-7 ekugcineni wafika e-USA ngemuva kokuchitha izinyanga enza ucwaningo lokuthi ungasifaka kanjani isicelo seVisa Yomshado. Ngiyabonga unkulunkulu ngithole Umsizi WeVisa. Imihlahlandlela yabo yama-visa kulula ukuyiqonda futhi uyilandele. Ngikweleta konke kulaba bantu, ngiyabonga.
Bhalisela ukuthola (masonto onkeizibuyekezo zezindaba zilethwe ngqo ebhokisini lakho lokungenayo.
Ubumfihlo bakho yinto yethu eza kuqala. Yonke imininingwane yokuthumela igcinwa iyimfihlo kakhulu. Ungazikhipha ohlwini nganoma yisiphi isikhathi. Ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthi siqoqa kanjani, sigcine futhi sicubungule kanjani imininingwane yakho eyimfihlo ngokuhambisana ne-GDPR, sicela ubuke eyethu Inqubomgomo yobumfihlo.
IMISEBENZI, IZINTO ZOKUPHAKATHI NOKUHLAZIYWA OKUNIKEZWA Yithi AKUSIZO IZELULEKO ZOMTHETHO NEZINHLOSO ZOLWAZI KUPHELA. KUFANELE UXHUMANE NOMMELI WAKHO UKUTHOLA ISELULEKO NGENHLONIPHO YONKE IMPIKISWANO NOMA INKINGA. UKUSETSHENZISWA KWE-WEBSITE NOKUFINYELELEKA KWAKHO AKUDALI YILUPHI UMTHETHI-Klayenti, NOMA UBUDLELWANE OBUFANAYO.
123 IKing Rd. I-West Street, iDolobha 1234
I-Copyright © 2020 Visa Helper - Wonke Amalungelo Agodliwe
i-cookielawinfo-checbox-analytics 11 izinyanga Le khukhi isethwe yi-plugin ye-GDPR Cookie Consent. Ikhukhi isetshenziselwa ukugcina imvume yomsebenzisi yamakhukhi esigabeni esithi "Izibalo".
I-cookielawinfo-checbox-iyasebenza 11 izinyanga Ikhukhi lisethwe yimvume yekhukhi ye-GDPR ukuqopha imvume yomsebenzisi yamakhukhi esigabeni "Okusebenzayo".
cookielawinfo-checbox-abanye 11 izinyanga Le khukhi isethwe yi-plugin ye-GDPR Cookie Consent. Ikhukhi isetshenziselwa ukugcina imvume yomsebenzisi yamakhukhi esigabeni esithi "Okunye.
Izinsizakalo, okokusebenza, kanye nokuhlaziywa okunikezwe yi-US akuzona izeluleko zezomthetho futhi ngezinjongo zokwazisa kuphela futhi akufanele kuthenjelwe kuzo njengezeluleko zezomthetho noma okuwukuphela komthombo wakho wolwazi. Kufanele uxhumane nommeli wakho ukuthola iseluleko maqondana nanoma iyiphi inkinga noma inkinga ethile. Ukusetshenziswa nokufinyelela kuwebhusayithi akubudali ubudlelwano bommeli namakhasimende. Imibono kanye nokuhlaziywa okuvezwe kuwebhusayithi akuphelele futhi kwenzelwe ulwazi kuphela. Yize ukuhlaziywa kwedatha okuhlinzekwe kuwebhusayithi kukhiqiziwe futhi kwacutshungulwa kusuka emithonjeni okukholelwa ukuthi inokwethenjelwa, asiyenzi futhi akufanele uthembele kunoma yisiphi isiqinisekiso, esiveziwe noma esishiwoyo, senziwa maqondana nokunemba, ukwanela, ukuphelela, ukuba semthethweni, ukuthembeka, noma wusizo kwanoma yiluphi ulwazi oluqukethwe lapha. Akunasimo lapho siyoba nesibopho kuwe nganoma yiluphi uhlobo ngenxa yokusebenzisa isayithi noma ukuthembela kunoma yiluphi ulwazi olunikezwe kusayithi. Ukusebenzisa kwakho isayithi nokuthembela kwakho kunoma yiluphi ulwazi olukulesi siza kungukuzibeka kwakho engcupheni.
Siyabonga ngokujoyina i-Visa Helper! Le webhusayithi yenzelwe ukususa ukudideka maqondana nama-visa nokuhamba ngokukubonisa imininingwane oyidingayo. Phendula imibuzo efanelekile kunoma iyiphi i-visa ongadinga usizo ngayo noma ofuna ukuyifaka isicelo. Khumbula ukuphendula le mibuzo ngokombono womfakisicelo (Lowo ofaka isicelo se-visa.) Uma usuvele use-United States futhi usebenzisa izinsizakalo zethu egameni lomuntu omfakela isicelo, khetha izinqumo ezifanele njengoba ziza phezulu. Uma udinga usizo, khetha inkinobho yokusekela bese usithumela uphenyo lwakho.
Awukasifaki isicelo sale visa okwamanje, azikho izinkinga! Okokuqala, sizokuthatha ukuthi uvivinye ukufaneleka kweVisa. Le mibuzo yenzelwe ukukubonisa amathuba okuthola le visa ngokuphendula imibuzo embalwa maqondana nomfakisicelo (Lowo ofaka isicelo se-visa). Ihlelwe ngokusebenzisa idatha yesikhathi sangempela yobudlelwano bezepolitiki, ezomnotho, nezokuphepha phakathi kwezwe lomfakisicelo nezwe eliqondiwe. Lokhu kuhlolwa akuhloselwe ukuthi kunembe ngokuphelele; Inhloso yayo kuphela ukukunikeza isilinganiso sokuthola i-visa. Uyacelwa ukuthi uqaphele, iVisa Eligibility Test eyenzelwe INFORMATIONAL PURPOSES KUPHELA, akumele usebenzise imiphumela njenganoma isiphi isinqumo sokugcina sokufaka isicelo njengoba icala ngalinye le-visa liphathwa ngawodwana kwinxusa ngokuya ngokufaneleka kwalo.
Lapha uzothola uhlu lwabameli bokufika, abanelayisense bokungena abangakusiza ngokufaka isicelo se-visa noma ukukusiza ngohlelo lwakho lokusebenza lwamanje. Khetha izihlungi ezingakwesobunxele ezisebenza ecaleni lakho le-visa ukuze unciphise ummeli osebenza ngohlobo lwe-visa yakho. Ungasesha futhi nommeli othile ngegama kubha yokusesha. Asenzi izethulo noma iziqinisekiso mayelana nokuqeqeshwa noma ikhono lanoma ibaphi abahlinzeki. Ekugcineni unesibopho sokuhlola iziqu zokukhetha uMhlinzeki wakho othile. Ngokuqhubeka nokusebenzisa amasevisi wethu, uyavuma ukungabelani ngemininingwane yommeli nanoma ngubani.
Njengoba umfakisicelo engazange afake isicelo se-visa, uzothatha iVisa Eligibility Test. SICELA UTHEMBEKE NGEMPENDULO YAKHO. Akukho ukukopela ngenqubo ye-visa yase-US, kuphela ozuza kulolu vivinyo. Lokhu kuhlolwa kuklanyelwe ukukubonisa amathuba okuthola le visa ngokuphendula imibuzo embalwa maqondana nomfakisicelo (Lowo ofaka isicelo se-visa). Ihlelwe ngokusebenzisa idatha yesikhathi sangempela yobudlelwano bezepolitiki, ezomnotho nezokuphepha phakathi kwezwe lomfakisicelo ne-United States. Lokhu kuhlolwa AKWENZELwanga ukuthi kunembe ngokuphelele; inhloso yayo kuphela ukukunikeza isilinganiso sokuthola i-visa. Lokhu kuhlolwa kungathathwa KANYE kuphela. Uma unesifiso sokuhlolela i-visa ehlukile, ungakha i-akhawunti entsha. Ungabuyela emuva ubuke imiphumela yakho ngaphansi kwenketho ye- "Akhawunti Yami" ngenhla. Uyacelwa ukuthi uqaphele, iVisa Eligibility Test eyenzelwe INFORMATIONAL PURPOSES KUPHELA, awufanele neze ukusebenzisa imiphumela njengesixazululo sokugcina sokufaka isicelo njengoba icala ngalinye le-visa liphathwa ngazinye kwinxusa ngokuya ngokufaneleka kwalo.
Lapha uzothola uhlu lwayo yonke imihlahlandlela yama-visa eqondene nezwe lakho. Sesha izwe lakho ekudonselweni phansi, bese ukhetha umhlahlandlela we-visa ofisa ukuwabuka. Ungabuyela kuleli khasi ngokuchofoza u- “My Visa Journey” ngenhla, bese ukhetha ukuthi “Ungasifaka kanjani isicelo”.
Lapha uzothola uhlu lwabalingani beqembu lesithathu abahloliwe ongabasebenzisa ukufaka i-visa yakho. Bonke abalingani bayahlolwa ngokwamazinga kaVisa Helper. Ungachofoza uzakwethu kuleli khasi ukuze uqondiswe kuwebhusayithi yabo. Uyavuma ukuthembela kwakho kunoma ibaphi abahlinzeki noma imininingwane enikezwe Amasevisi kungengcuphe yakho kuphela futhi ubhekana nesibopho esigcwele sayo yonke ingozi ehambisana nalokho.